ကျောက်ဆည်မြို့ ကျက်သရေဆောင် ရွှေသာလျောင်းတောင် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ကျောက်ဆည်မြို့ ကျက်သရေဆောင် ရွှေသာလျောင်းတောင်	12
ကျောက်ဆည်မြို့ ကျက်သရေဆောင် ရွှေသာလျောင်းတောင်
Posted by thihayarzar on Jul 20, 2012 in Photography | 12 comments
ဗုဒ္ဓပေါင်းပြည့်စေတီလွမ်းမြေ့စေတီဆရာတော်ဦးဝိသုဒ္ဓ လွမ်းမြေ့စေတီဥာဏ်တော်ပေ ( ၈၀ ) ရှိ အဘယမုဒြာ မြတ်စွာဘုရားကြီး [caption id="attachment_139046" align="alignleft" width="600"] လက်ယာရံ ရဟန္တာငါးပါး[/caption]လက်ဝဲရံ ရဟန္တာငါးပါးဦးဝိသုဒ္ဓကန်တော်ကန်တော်အတွင်းပိုင်းနဂါးရုံဘုရားဗုဒ္ဓဂါယာမှ မဟာဗောဓိပင်နှင့် ရှစ်မျက်မှာ ဘုရားဆရာတော်ဦးဝိသုဒ္ဓ ပုံတူရုပ်ကလပ်တော်ဆရာတော် အရှင်ကေ၀သ ပုံတူ ရုပ်ကလပ်တော်ဓာက်တော်ကြွင်းကျန်တော်မူသော ဆရာတော်သုံးပါး
မိသားစုသုံး ကင်မရာ အစုက်လေးနဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ သိစေချင်သော ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပါ။ ပုံများကိုဆက်လက်တင်ပြပါဦးမည်။
ဇောက် ထိုး says: ရဟန္တာရုပ်တုတွေက လက်အမျိုးမျိုးတွေနော်….. မျက်နှာတော်တွေက တည်နေသေးတယ်။
ကျွန်တော်က သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံတော်တွေဆို အရမ်းသဘောကျတာ….
ခုလို ဖူးတွေ့ရတာ ကျေးဇူးပါ
မောင်ပေ says: ရာဇာကြီးရဲ့ စေတနာတွေကြောင့်
mamanoyar says: အခုလို တင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ညလေး says: ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်ပေမယ့် အဝေးကနေ ..
ဖူးမျှော် ကြည်ညို သွားပါတယ်ရှင်…….
eipu says: ကျောက်ဆည်မြို့ကို ပြန်သတိရပါတယ်
Ma Ei says: မန္တလေးဘုရားဖူးအပြန် ကျောက်ဆည် ရွှေသိမ်တော်ဘုရား
ဖူးရင်း တောင်ပေါ်ဘုရားတွေကိုဖူးချင်လို့ မျှော်ဖူးခဲ့ရတယ်…
ခုလို ပုံတော်တွေတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်…
YingLamp says: အားပါးးးး ကျောက်ဆည်ကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာပဲ .. ဒီ ဘုရားဝင်းကြီးရှိတာ လုံးဝမသိတာ .. တော်တော်လှလှပပရှုခင်းပဲဗျ ..
manawphyulay says: မွေးနေ့မှာ ကျောက်ဆည်မြို့ရဲ့အထင်ကရ ဘုရားတွေ ဖူးမြော်ရတာ ရင်ထဲကို တကယ်ပဲ အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ဖြတ်တော့သွားတယ်ခဏခဏ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: လူကိုယ်တိုင်က မရောက်ဖူးတော့
ကျနော်တို့မှာ ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေ တင်ပေးတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း ..
ကြည်လည်း ကြည်နူးရ၊ ရောက်ဖူးသလိုလည်း ခံစားလိုက်ရ …
ခုလည်း ကိုသီဟရာဇာ တင်ပေးတဲ့ ပုံတွေကို
ကြည်နူးစွာ ဖူးမြော်သွားပါကြောင်း …
ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပါဗျာ …..
TTNU says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ရောက်ခဲ့တုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ
အခုလိုပုံတွေ ဖူးရတာ စိတ်ချမ်းသာသွားတာပါပဲ။
ကျေးဇူးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 255
thihayarzar says: လက်ယာရံ သာဝကငါးပါး မှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ( ဥာဏ်ပညာကြီးခြင်း)၊ အရှင်အညာသိကောဏ္ဏ ( ရတ္တညူ – ၀ါရင့်ခြင်း)၊ အရှင်မဟာကသာပ ( ဓုတင်ဆောင်ခြင်း )၊ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ ( ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိဥာဉ်ရခြင်း )၊ အရှင်အာနန္ဒာ ( အကြားအမြင်ကောင်းခြင်း၊ သတိကောင်းခြင်း၊ ဥာဏ်ကောင်းခြင်း၊ လုံးလကြီးခြင်း၊ အလုပ်အကျွေးကောင်းခြင်း)
လက်ဝဲရံ သာဝကငါးပါး မှာ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် ( တန်းခိုးကြီးခြင်း )၊ အရှင်ကာဠုဒါယီ ( ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကို ကြည်ညိုစေခြင်း)၊ အရှင်ပိလိန္ဒ၀စ္ဆ( နတ်တို့ချစ်မြတ်နိုးခြင်း)၊ အရှင်ဗာကုလ ( ကျန်းမာရေးပြည်စုံခြင်း) ၊ အရှင်ပုဏ္ဏ ( ဓမ္မကတိကအရာ၌တရားဟောကြားခြင်း)
Comments By Postကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - Miss Crystalline - ဦးကြောင်ကြီးအိပ်မက်မင်းသမီး - Kaung Kin Pyar - Phoe Thitsarနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - Miss Crystalline - YUYA MONလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ဦးကြောင်ကြီး - မင်းမင်းမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - Myo Thant - ဦးကြောင်ကြီးမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ဦးကြောင်ကြီး - kai``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - ခင် ခComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - မင်းမင်း - ရွှေတိုက်စိုးသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - ဦးကြောင်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - မင်းမင်းရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ရွှေတိုက်စိုး - kaiအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - ဦးကြောင်ကြီး - Miss Crystallineသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - uncle gyiအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ko chogyi - Lutt Latt Thuသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - Miss Crystalline - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - Aung Myat Lin - uncle gyiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Foreign Resident - Mobile13ငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - Mobile13 - လူကလေးရထား ထွက်တော့ မယ် - Mobile13 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအဟံ ပထမံ - padonmar - kaiCongress - ရာမည - ရာမညကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - လုံမလေးမွန်မွန် - အလင်း ဆက်သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66784 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59069 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews